PFOB press release: Canadian Minister of Foreign Affairs to Present Honorary Canadian Citizenship in Ceremony for Aung San Suu Kyi
Media Contact: (867) 668-6565 May 2, 2008
Parliamentary Friends of Burma is proud to announce that the Canadian Foreign Affairs Minister will present the esteemed Honourary Canadian Citizenship to Daw Aung San Suu Kyi, inaformal ceremony on Monday, May 5th at 5:00 pm in room 256-S Centre Block of Parliament.
This isalong-awaited event”, said PFOB Chair, Larry Bagnell, “and dream for many of us fighting for democracy in Burma”.
Aung San Suu Kyi, leader of the National League for Democracy in Burma, is the fourth person to receive this prestigious award and the first female. The three other recipients are Raoul Wallenberg, Nelson Mandela, and Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama.
On October 17th, 2007 the motion, first discussed by Canadian Friends of Burma and PFOB, was passed with unanimous consent.
“We were very proud when this motion was passed and have been waiting ever since to know when this vastly significant ceremony would be held”. Mr.Bagnell continued.
“We got word of it on Monday (April 28) that it would happen in one week and have been feverously organizing events and celebrations with Rights and Democracy, CFOB and Inter Pares, for this ceremony and for the arrival of exiled Prime Minister, Sein Win.
Minister Bernier will present the award to Aung San Suu Kyi’s cousin, Prime Minister Sein Win, of the exiled National Coalition Government of the Union of Burma. Prime Minister Sein Win currently resides in Washington. Aung San Suu Kyi remains under House Arrest in Rangoon.
Parliamentary Friends of Burma consists of Members and Senators from all parties of the Canadian Parliament.
Minister Bernier to Present Honorary Canadian Citizenship for Aung San Suu Kyi
On Monday May 5, 2008, the Honourable Maxime Bernier, Minister of Foreign Affairs, will present the Certificate of Honorary Citizenship for Aung San Suu Kyi to her cousin, Sein Win, duringaceremony on Parliament Hill.
Important Burma events in Ottawa in coming days
May 3: Burma Protest against Shame Constitution
85 Range Road, Ottawa – for location, see map
Time:4P.M. to6P.M May3Saturday
Contact: Salai Chit Tu at 613-219-7066
May 3: Seminar on Burma’s Ethnic people
Time: Saturday at Noon 12:00 – 2PM Saturday May 3
Location: Bronson Center 2nd Floor
211 Bronson Avenue (near Somerset)
May 5: Honorary Canadian Citizenship Awarding Ceremony for DASSK
Hosted by Foreign Minister Maxime Bernier
Location: room 256-S Center Block, Parliament Hill
Time: 5:00 PM Monday May 5
May 5: First Reception in Honor of DAASK with Burmese/Ethnic community
Hosted by CFOB, Inter Pares and PFOB
Time: 6:00 - 7:00 Monday May 5
May 6: PFOB Meeting with Dr.Sein Win and Opposition Leaders and Foreign Affairs critics
Time: 5:30 - 6:00 Tuesday May 6
Location: room 340-S Center Block, Parliament Hill
May 6: Second Reception in Honour of DASSK
Hosted by PFOB, Rights & Democracy, and CFOB
Time: 6:00 – 8:00 pm Tuesday May 6
Location: 216-N Central Block of the Parliament
The Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206 , 145 Spruce St. , Ottawa , K1R 6P1 ; Tel: 613.237.8056; Fax: 613.563.0017; Email: cfob@cfob.org; Website: www.cfob.org
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/04/20080အကြံပြုခြင်း
မနေ့ည ၁၁ နာရီက စတိုက်အပြင်းဆုံးအချိန်ကတော့ မနက် ၅ နာရီ၊ ၆ နာရီ
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း စမ်းချောင်းမြို့နယ် တော်တော်ဆိုးတယ်စမ်းချောင်းကဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရုံးတောရွဲသွားပီ
သမိုင်း ခဝဲခြံ အင်းစိန် ပုဇွန်ထောင် နဲ့ မြိုသစ်ဖြစ်တဲ့ ဒဂုံ ရွေပြည်သာ လိူင်သာယာာ တော်တော်အခြေအနဆိုးတယ် ရေအသကုန်ကြီးနေပြီ
ရန်ကုန်မြို့တွင် ယန္ဒရား ရပ်
လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ အားလုံး ရပ်
ရန်ကုန်မြို့ပျက်စီးမှု အကြီးအကျယ် ဖြစ်
အမှတ် (၁)၊စမ်းချောင်းမြို့နယ် မူးယစ်ဆေးဝါးပြတိုကလေဘေးဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖွင့်
(VOA)နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ် လူ၃၅၀ကျော် သေဆုံး
အင်အားပြင်းထန်တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက မြို့ကြီးတချို့မှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အတူ လူအသေအပျောက် ရာနဲ့ချီရှိနေပြီလို့ အစိုးရရုပ်မြင်သံကြား သတင်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံး အခြေအနေ တွေ သိရသမျှကို ဦးအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးပါမယ်။
နာဂစ် (Nargis) အမည်ရတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင် ရောက်တိုက်ခတ် လာရာမှာ အခုနောက်ဆုံး သိရသလောက်ဆိုရင် ဧရာဝတီတိုင်းထဲမှာ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတွေ လူအသေအပျောက် တွေ အတော့်ကိုများခဲ့တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ မုန်တိုင်း ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းထဲမှာဆိုရင် လူပေါင်း (၂၂၂) ယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာလည်း (၁၉) ယောက်အထိ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြား သတင်းက ကြေငြာက ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
“ယခုထက်ထိ ရရှိတဲ့ သတင်းများအရ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင် အမျိုးသား (၈)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၁)ဦး၊ ပေါင်း (၁၉)ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာ (၁၁၇)ဦး၊ အမာမြို့နယ် ခေတ္တာကျွန်းမှာ (၃၂)ဦး၊ တော်ဈေးတန်းကျွန်းရွာမှာ (၁၇)ဦး၊ အိမ်မဲမြို့မှာ (၂)ဦး၊ လပွတ္တာမြို့မှာ (၁)ဦးနဲ့ ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာ (၅၃)ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း စုစုပေါင်း (၂၂၂)ဦး သေဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။”
အစိုးရရဲ့ မြ၀တီ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းက အနည်းဆုံးလူပေါင်း (၂၄၁) ယောက်အထိ သေဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြေငြာသွားတာပါ။ ဧရာဝတီတိုင်းထဲက လပွတ္တာ၊ ကျိုက်လတ် စတဲ့မြို့တွေမှာ အဆိုးဆုံးထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့သလို၊ လှေ သင်္ဘောတွေ နစ်မြှပ်တာတွေ ရှိခဲ့ပြီး ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် အိမ်ခြေ ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့ သတင်းတွေကဆိုကြ ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မြို့တွေက အခြေအနေတွေကို သိရဖို့အတွက် ဆက်သွယ် စုံစမ်း ပေမယ့်လည်း တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ၊ အင်တာနက်လိုင်းတွေနဲ့ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်နေတာမို့ အသေးစိတ် အခြေအနေတွေကို သိရဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တနာရီ မိုင် (၁၂၀) ကျော်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရလို့ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ အကြီးအကျယ် ရှိခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့က အခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်လို့တော့ မြို့ခံတဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“အိမ်တွေ အကုန် ပျက်ကုန်တယ်။ သစ်ပင်များတဲ့နေရာတွေ ပိုပျက်တာပေါ့။ မီးလည်းမလားဘူး။ အိမ်မိုးမှာကာထားတဲ့ သွပ်ပါလန်ထွက်သွားတယ်။ ဆိုးတာက ဒီအချိန်မှာ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး။ ဘာဆိုင်မှလည်း မဖွင့်ဘူး။ ဆိုင်တွေ အကုန် ပိတ်ထားတယ်။ တက္ကဆီတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီ။ ဆီဈေးက အခု (၆၀၀၀)ကျော်ရောက်သွားပြီ။ တချို့နေရာဆို(၆၅၀၀-၇၀၀၀)ဖြစ်နေတယ်။ လူတွေကလည်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။ စားစရာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကြက်ဥတလုံး အခု (၂၀၀)ဖြစ်နေပြီ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မီးတွေကလည်း တလလောက်ပျက်မယ် ကြားနေရတယ်။”
သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဖက်ကတော့ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသူတွေအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသလို မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် က အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတခု ခေါ်ယူပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကော်မတီတခု ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်း အစိုးရပိုင် သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုလို အကြီးအကျယ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနေရာမှာ အာဏာပိုင်တွေဖက်က ထိထိ ရောက် ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ မရှိဘူးလို့လည်း ရန်ကုန်မြို့ခံက သူ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါသေးတယ်။
“အင်္ကျီပြာတွေနဲ့ ရဲတံဆိပ်တွေနဲ့ လူတွေတော့ တွေ့တယ်။ နိုင်ငံတော်က ဘာမှလည်း လုပ်မပေးဘူး။ သိတောင်မသိဘူးလား မသိဘူး။ ကြည့်ရတာ။ ရဲတွေ တန်းစီသွားတော့ ဘယ်သွားလဲ လိုက်ကြည့် တာ သူတို့ လွှတ်တော်အရှေ့သွားတာ။ လွှတ်တော်မှာ သစ်ပင်တွေလည်းနေတယ်လေ။ သူတို့ လက်ထဲမှာတော့ သေနတ်တွေပါတယ်။ ဓါးတချောင်းမှ မပါဘူး။ ဘာတွေလည်းမသိဘူး။ ဒိုင်းတွေ၊ ဒုတ်တွေနဲ့ သေနတ်တွေနဲ့ သွားနေကြတယ်။ ဘာလုပ်လဲကြည့်တော့သစ်ကိုင်းတွေကို လက်နဲ့ ချိုး နေတယ်။”
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်း မြို့ခံတယောက်က ပြောပြသွားတာပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်ကနေ စတင်ပြီး တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေမုန်တိုင်းဟာ ဟိုင်းကြီးကျွန်းကို ဖြတ်သန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အား ပျော့ လာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒဌာနက အစောပိုင်းက ခန့်မှန်း ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင် ပြည်နယ်တွေကို တော့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဘေးသင့်ရာဒေသတွေအဖြစ် သတ်မှတ် ကြေငြာ ထားခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ဆုံး အခြေအနေမှာတော့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဖက် ထိုင်းနိုင်ငံကို ဦးတည်ပြီးတော့ အားပျော့သွားပြီလို့လည်း မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်တွေက ဆိုကြ ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း အခုလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နောက် မြန်မာစစ်အစိုးရက လာမယ့် စနေနေ့မှာ စတင်ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆက်ပြီး ကျင်းပဖြစ်မယ်၊ မကျင်းပ ဖြစ်ဘူး ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုး မကြားရသေးပါဘူး။
အခုနောက်ထပ် ရန်ကုန်ကလာတဲ့ အေပီ သတင်းတပုဒ်အရဆိုရင် သေဆုံးသူဦးရေဟာ အနည်းဆုံး ၃၅၁ ယောက် ရှိသွားပြီလို့လည်း အစိုးရသတင်းရပ်ကွက်ကို ကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အနေနဲ့လည်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အချက်အလက်တွေရဖို့ အဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ဖို့ရှိပေမယ်လို့ အပျက်အစီးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့် အခက်အခဲ တွေရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်းက ဆိုပါတယ်။
Myanmar Yangon News upade cyclone
မြို.နယ်။ရပ်ကွတ်..ပြည်နယ်တို့၏ပျက်စီးမှူကိုအနည်းငယ်သာတင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်..ဉပမာ…ကရင်ပြည်နယ် မှာ အိမ်3လုံးပျက် ဓါတ်တိုင်3တိုင် ကျောင်း အမိုးပြုတ်ထွက်တာတွေပါ ....
MRTV&MWD ဗီဒီယိုအခုည ကြည့်မိပါတယ်ဝန်ကြီးတွေပဲပြသွားပါတယ် ဆိုးဝါးတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ပျက်စီးမူမြင်ကွင်းတွေထပ်မပြတော့ပါ..တော်တော်စိတ်ပျက်စရာအစိုးရပါ..တပ်မတော်ရဲ့စေတနာပါဆိုပြီးထပ်ကာထပ်ကာပြောနေတာ..ခင်ဗျားတို့ကိုမြင်စေချင်ပါတယ်
MWD ၏ ရန်ကုန်မုန်တိုင်း
Toronto cop faces drunk driving charges after bystander calls police
May 02, 2008 08:30
TORONTO - A Toronto police officer has been arrested and charged with drunk driving offences.
Police say Const. Adam Lourenco, 31, drove throughagreen light at3a.m. Friday and stopped his car in the middle of an intersection. Officers were alerted whenabystander saw the vehicle sitting in the intersection with the engine running and headlights on.
Lourenco was charged with impaired care and control ofamotor vehicle and over 80 milligrams care or control.
He has been with the Toronto Police Service for six years.
Lourenco is scheduled to appear in court on June 20.
PFOB press release: Canadian Minister of Foreign A...
ရန်ကုန်နောက်ဆုံးအခြေအနေပါMay 4th, 2008 by adminရန်...
(VOA)နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ် လူ၃၅၀ကျော် သေဆုံး အင်အာြး...
Myanmar Yangon News upade cyclone May 4th, 2008 by...
ရန်ကုန်မုန်တိုင်း VODEO to see
Toronto cop faces drunk driving charges after byst...